'Kevin Can Wait': CBS စီးရီးသည်မင်းသမီးထွက်ပြီးနောက်တွင် Leah Remini ကိုအချိန်ပြည့်ငှားရမ်းသည် - ဟူးလူ
'Kevin Can Wait': CBS စီးရီးသည်မင်းသမီးမှထွက်ပြီးနောက်တွင် Leah Remini ကိုအချိန်ပြည့်ငှားသည်
'Kevin Can Wait' - CBS ၏ယဉ်ကျေးမှု
Sense8 ပရိတ်သတ်များကပြသမှုကိုကယ်တင်ရန် Netflix ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည် လိမ္မော်ရောင်သည် New Black - OITNB အကြောင်းမသိနိုင်သောအရာ ၃၀
ရာသီတစ်ခုအပြီးတွင်ကီဗင်ဂျိမ်းစ်စီးရီးသည် 'Kevin Can Wait' သည် Leah Remini ကိုငှားရမ်းကာအခြားမင်းသမီးသည် CBS sitcom မှထွက်ခွာသွားသည်။ ယောက်ျားတွေ, ငါကီဗင်မစောင့်နိုင်ပုံပါဘဲ။
CBS သည် Kevin James နယ်မြေတွင်ပြhavingနာရှိနေသည်ဟုထင်ရသည်!
အရ TVLine CBS သည်သူတို့၏စီးရီးအသစ်များအပေါ်အနည်းငယ်သောအရာများလှုပ်ခါနေသည် ကီဗင်စောင့်နိုင် ရာသီတစ်ခုအပြီးတွင်ကီဗင်ဂျိမ်းစ်စီးရီးသည်မင်းသမီးအားဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည် Erinn ဟေးယက်စ် နောက်တစ်ခု တိကျသောအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲ CBS သည်မင်းသမီး Leah Remini အားလတ်တလောလွတ်လပ်သောနေရာကိုဖြည့်ရန်အသနားခံနေသည်။ မင်းသမီးစီးရီးအပေါ်ဂျိမ်း '' ဇနီးကစားသကဲ့သို့ CBS ဟေးယက်၏ထွက်ခွာသွားဖြေရှင်းရန်မည်သို့လက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။
ဟေးယက်စ်သည်အောက်ပါထွက်ခွာသွားမှုအကြောင်းနှင့်မင်းသမီးများ၏ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုကိုစစ်ဆေးပါ။ တွစ်တာ အကောင့်:
ဟုတ်ပါတယ်, ငါပြပွဲကနေသွားကြကုန်အံ့ခဲ့တာပါ။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကျွန်တော်မှာအတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံ ၁ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ https://t.co/HfYKzVuSnT
- erinn hayes (@hayeslady) ဇွန် 3, 2017
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်း ဦး ရာသီအသစ်စီးရီး ကီဗင်စောင့်နိုင် ဖြစ်သော CBS အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနံပါတ်များကိုစတင်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှ ၁၈.၄၉ ပြပွဲတွင် ၁.၆ ပျမ်းမျှအားဖြင့်စီးရီးသည်ကြည့်ရှုသူ ၉.၁ သန်းကိုရရှိခဲ့သည်။ ပုံသေနည်းပုံအလုပ်ဖြစ်တယ်နေစဉ်ဒီတော့အဖွဲ့သည်၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ် ဦး ကျဆင်းသွားသည်။ လှုပ်ရှားမှုသည်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်၊
Leah Remini ကိုအချိန်ပြည့်အနေအထားသို့ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းသည်ပြောင်းရွှေ့မှုသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ နှစ်ခုဟာသဟာသထဲမှာသရုပ်ဆောင်အဖြစ်သူမနှင့်ဂျိမ်းစ်မျှသူစိမ်းဖြစ်ကြသည် Queens ဘုရင် (နောက်ထပ် CBS ပြပွဲ) ကိုးနှစ်။ ဒါကြောင့်သူတို့မှာကြီးမားတဲ့မြင်ကွင်းပေါ်ရှိဓာတုဗေဒဓာတ်များရှိပြီး CBS ကဒီဟာကိုသူတို့ကောင်းကျိုးအတွက်သုံးတာပေါ့။
Disney အလှတရားနှင့်သားရဲ netflix streaming
ဒါကြောင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကီဗင်စောင့်နိုင် ?
'ကီဗင်စောင့်နိုင်သလား' ကိုမြင်သလား CBS မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာလား။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်ကဏ္sectionတွင်သင်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအခြား CBSers အားအသိပေးပါ။
ရာသီ4flash သည် netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်ပေါ်လာပါသနည်း
ရာသီ7တော်တော်နည်းနည်းမုသာကိုသုံးသောလေထုနေ့စွဲ
netflix ပေါ်မှာရှိသမျှသောလမ်း jingle